Amazon Web Service ine nhau dzine simba dzinoenderana neLinux | Linux Vakapindwa muropa
Amazon Web Services (AWS) pamwe ndeimwe yemasimba makuru uye akasimba kwazvo komputa mapuratifomu kunze uko, padivi peGoogle Cloud masevhisi uye zvakare Azure yeMicrosoft. Aya mahofori matatu anokwikwidza nenzira ine hutsinye yekuwana masevhisi akanakisa kune vatengi vavo, uye nekuda kweizvi vanoshandisa michina mikuru mune chimwe chinhu chakafanana, uye ndiko kushandiswa kweGNU / Linux senzira huru yekushandisa kuve inokwanisa kubata zvese.simba iro nenzira inoshanduka, yakagadzikana uye yakachengeteka.
Iwe unogona kunge wakatozvinzwa kare kuti Jeff Bezos, nemadzitateguru kubva kuValladolid (Spain), iye zvino akagadza Bill Gates iye semurume akapfuma kwazvo pasirese, zvimwe nekuda kwechitoro chake cheAmazon, pamwe nekuda kwemari yakatorwa AWS uye pamwe futi nekuda kweiyo huru jekiseni remari iyo yaakagamuchira yeBlack Chishanu ... Eya, mukati meAWS kune huwandu hweshumiro yatinogona kuhaya nekuishandisa kune zvatinofarira, mamwe acho ane muto uye anonakidza kune vese vanhu uye makambani.
Imwe yemasevhisi aya ndeye AWS Lambda, chikuva chinokutendera iwe kuti uite kodhi mugore pasina kuve neyako sevha kana manejimendi akati sevhisi. Iwe waizongobhadhara chete iyo nguva yekomputa yakashandiswa pasina zvimwe, nepo iwe usingazobhadhariswa apo kodhi isiri kuitiswa. Zvakanaka, sevhisi yakanaka iyi inovimba neLinux ine chimiro chakatsiga, chavanodaidza kuti "isina server", kubvisa kudiwa kwekumhanyisa maseva akasarudzika akatsaurirwa kugonesa masevhisi mugore ... Ehe, ndizvozvo! Sevhisi isina sevhisi.
Rimwe basa ndere AWS Alexa, iyo zvakare yakasimbiswa nekuda kweLinux. Alexa ibasa rezwi rakavakirwa paAWS uye rinoshandiswa nemamirioni eAmazon zvishandiso, saka kana uine imwe yacho, pamwe unoziva zvandiri kutaura nezvazvo. Asi ikozvino ichave ichiwanikwa kune makambani. NaAlexa, mutengi kana mushandisi anotenderwa kuve nezwi sevhisi rinovatendera kusangana netekinoroji nenzira yakasarudzika yevanhu pane kushandisa nzvimbo dzakasiyana ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Amazon Web Service ine simba nyowani maficha anoenderana neLinux